I-GQ-KG t yakhiwe ngezinto ezinwetshiwe ezincane, isinciphisi sokusebenza samanzi aphezulu, izinto ezahlukahlukene ezingaphili nezakhiwe nge-polymer izinto kanye ne-PO, usimende ongu-42.5. Uketshezi oluhle kakhulu, i-slurry ezinzile, i-degree enhle yokugcwalisa, akukho ukuncipha, ukunwetshwa okuncane, azikho izinto eziyingozi ekuqiniseni. Kuyi-gro
I-GQ Defoamer yisikhubekiso esizinikezele nge-polycarboxylate superplasticizer. I-GQ defoamer isebenza ngokushesha, ngokuzinzile futhi ingavimbela ukukhiqizwa kwe-bubble isikhathi eside.
I-BT-302 Polycarboxylate superplasticizer 40% (Uhlobo olulondolozayo oluphezulu)
I-BT-302 isizukulwane esisha sokukhipha okusheshayo nokuphuza ukugcinwa kotshwala kamama okwenziwe kusuka ku-TPEG nge-polymerization yamahhala, futhi iqembu elisha lokukhishwa okuqhubekayo lingeniswa ku-synthesis.